YEYINTNGE(CANADA): Thursday, July 10
အောင်ဇော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရက အဆိုပြု အကောင်အထည်ဖော်လာခဲ့သည့် “လမ်းပြမြေပုံ” ဆိုသည်မှာ အမှန်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ချေ။ စစ်အစိုးရ၏ ထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာတခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသန်းရွှေက အရှင်ထွက် ထွက်လိုသည်။ ဤလမ်းပြမြေပုံ ဆိုသည်မှာလည်း ဤသို့ အရှင်ထွက်နိုင်ရန် ၎င်း၏ အသွင် ကူးပြောင်းရေးကြားကာလ အစီအစဉ်သာ ဖြစ်သည်။အဆင့် ၇ ဆင့်ပါသည့် ဤလမ်းပြမြေပုံကိုသုံး၍ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက နိုင်ငံရေးပြဿနာ အရှုပ်အထွေးများထဲမှ အန္တရာယ် ကင်းစွာ၊ အရှင်ထွက် ထွက်လိုနေသည်။ သူက ဤလမ်းပြမြေပုံကိုလည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တိုင်အောင်သာ လိုအပ်ချက်ရှိသည်။ ဤအချိန်တိုင် သူ၏မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူ လက်ဝေခံများအတွက် လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းစွာ နေနိုင်ရေးအတွက် သူက သေချာ အောင်လုပ်ထားချင်သည်။သူက ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားပြီး၊ ပြီးလျှင် စစ်တပ်က ကျောထောက်နောက်ခံပြုထား သည့် အရပ်သားအစိုးရတခု ပေါ်ထွက်လာမည်မှာလည်း သေချာလှသည်။ ယခုလမ်းပြမြေပုံကို မည်သူမျှ မဖျက်ဆီး မနှောင့် ယှက်နိုင်စေရန် ကာကွယ်မည်ဟုလည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက သံန္နိဌာန်ချထားသည်။အသက်အရွယ် အိုမင်းလှပြီဖြစ်သည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးက ယခုလမ်းပြမြေပုံအပေါ် ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေကြောင်းကို လွန်ခဲ့သည့် မတ်လ တပ်မတော်နေ့ မိန့်ခွန်းပေးရာတွင်လည်း အထင်အရှားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤမိန့်ခွန်းတွင် သူက အာဏာကို မမက်မော ကြောင်း၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသူများကို အစိုးရအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း စိတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မတိုက်ခတ်မီ နေပြည်တော်တွင် တခြားခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်တပ် တပ်မှူးများနှင့် တွေ့ဆုံသည့် အစည်းအဝေးတခု၌လည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲကိုသော်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုများကိုသော်လည်းကောင်း နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးပမ်းလာသူမှန်သမျှကို သုတ်သင် ချေမှုန်းရန်လည်း အမိန့်ပေးခဲ့သေးသည်။ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် ကြံစည်ကြိုးပမ်းသူမှန်သမျှကို လိုအပ်ပါက ဖမ်းဆီးရန်၊ ထိန်းသိမ်း ရန်နှင့် သုတ်သင်ချေမှုန်းရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်း စစ်တပ်မှူးများသို့ အပြည့်အ၀ အပ်နှင်းထားခဲ့သည်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ကပ်ဘေးဒုက္ခများကြုံရသည့်တိုင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါ။ သူက ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဇွတ်တိုး၍ ဆက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤဆန္ဒခံယူပွဲတွင်လည်း ပြောင်မဲခိုးမဲလိမ်ခဲ့ပြီး လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အလားတူ ညစ်ပတ်၍ မဲအရယူကြလိမ့်ဦးမည် ဖြစ်သည်။ယခုအချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် မေးခွန်းတခုမှာ ယခုလမ်းပြမြေပုံအစား တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်း မရှိတော့ပြီ လောဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။ကုလသမဂ္ဂက ယခုလမ်းပြမြေပုံတွင် အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရှိရန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုပါရန် တောင်းဆို ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက မသိကျိုးကျွံပြုနေခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရှိ အတိုက်အခံများကလည်း ဆန္ဒခံယူပွဲ တွင် ကန့်ကွက်မဲများပေးကြရန် လှုပ်ရှားစည်းရုံးခဲ့ကြသော်လည်း စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ကြီးက ခပ်ရဲရဲပင် သူ့လမ်းအတိုင်း ရှေ့တိုးချီတက်ခဲ့သည်။ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအဖို့ ရှေ့ဆက်ရမည့်လမ်းသည် ကြမ်းတမ်းခက်ခဲသော လမ်းကြမ်းနှင့်ကြုံရပေတော့မည်။ သံသယရှိစရာ မလိုသည့်အချက်မှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ အတိုက်အခံ အင်အားစုများသည် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်စီးရာပျက်စီး ကြောင်း ဆောင်ရွက်စည်းရုံးကြတော့မည် ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကာလက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (USDA) ရုံး တခုအနီးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ လာမည့်ကာလတွင် ပို၍ တိုက်ခိုက်မှုများ ကြုံရဖွယ်ရှိကြောင်း ခိုင်လုံသည့် သက်သေပြ ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ဤပေါက်ကွဲမှုက ရန်ကုန်မြို့မြောက်ပိုင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ မရှိကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။စစ်အစိုးရ၏ လက်ကိုင် ဤကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပံ့ပိုးမှုများ ပေးထားခဲ့သည်။ ယခု အခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၅၇ သန်း အနက် ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင် ၂၃ သန်းကို စည်းရုံးထားနိုင်ပြီဟုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့ ၀င်များသည် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အဖွဲ့ဝင်များကို လူရမ်းကားဆန်ဆန် တိုက်ခိုက်မှုများ၌ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသည်ဟု လူအများက စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စစ်အစိုးရကို အမာခံ ထောက်ခံနေသည့်သူများအပေါ် အလားတူ တိုက်ခိုက်မှုများမှာလည်း ယခုမှစ၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလများအတွင်း ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်သေးသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများသည်လည်း ကြောင်လိမ် လှေခါးသဖွယ် ထပ်၍ အဆင့်တက်ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ် ရှိနေပါသည်။ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် ဒေသတွင်း ဒေသအပြင်ရှိ အစိုးရများအနေဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် မည်သို့မည်ပုံ ကိုင်တွယ် ဆက်ဆံရမည်ကို သဘောကွဲနေကြလျှင်၊ မပြတ်မသားဖြစ်၍ နေကြလျှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအနေဖြင့် သူဖြတ်သန်းရမည့် လမ်းတွင် ကြုံတွေ့ရမည့် အတားအဆီးများကိုလည်း ကောင်းစွာနှိမ်နင်း ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထင်ရှားသည့်၊ လူထောက်ခံမှု ရရှိကြသည့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်အများမှာ လူထုကို စည်းရုံးအုံကြွ၍ စစ်အစိုးရ၏ တရားဝင်မှုကို စိန်ခေါ်အံတုနိုင်ကြသော်လည်း ထိုသူအများမှာ ယခုအခါ ပုန်းအောင်း၍ဖြစ်စေ၊ ထောင်တွင်း၌ ဖြစ်စေ ရှိနေကြရပါသည်။ အကယ်၍ စက်တင်ဘာဆန္ဒပြပွဲများကဲ့သို့ လူထုအုံကြွမှု ပေါ်ပေါက်လာမည်ဆိုဦးတော့ စစ်တပ် များက “တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး” အကြောင်းပြ၍ အလျှင်အမြန် ချေမှုန်းနှိမ်နင်းပစ်ကြဦးမည်မှာ သံသယရှိစရာမလိုသည့် အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ အတိုက်အခံအင်အားစုများကလည်း အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲနေကြပြီး တညီတညွတ်တည်း အသံမထွက်နိုင် ဖြစ်နေကြပါသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များမှာလည်း စစ်အစိုးရကို စိန်ခေါ်ရန် မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ချိနဲ့အားပျော့နေကြပါသည်။ အချို့သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကလည်း စစ်အစိုးရ အလိုကျ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ယခုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ လမ်းပြမြေပုံကို စိမ်ခေါ်နိုင်မည့် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ လမ်းပြမြေပုံအသစ်တခုကို ရေးဆွဲကြရတော့မည့် အချိန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ကြရတော့မည့် အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလမ်းပြမြေပုံမှတဆင့် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အရှင်ထွက် ထွက်နိုင်ကောင်း ထွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ သန္ဓေသားကတော့ အသက်မဲ့မြဲ မဲ့နေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
မေ ၂၅ ရက်နေ့က မောင်ဝိတ်ကိုယ်တိုင် ကျိုတ်လတ်တွင် မုန်တိုင်းဘေး ဒုက္ခသည်များကို ဆန်များ လှူတန်းနေစဉ်။ဓာတ်ပုံ- အလင်းတန်းဂျာနယ်မောင်ဝိတ်ကုမ္ပဏီ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ မရေရာမဇ္ဈိမသတင်းဌာနကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 10 2008 17:22 - မြန်မာစံတော်ချိန်ချင်းမိုင်။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ ဖမ်းဆီးခံနေရပြီးနောက် မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစုကုမ္ပဏီ၏ နာဂစ်ဒဏ်သင့် ကျိုတ်လတ်မြို့တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်မှာ မရေရာတော့သည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်။ရန်ကုန်တိုင်း လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစု ကုမ္ပဏီလိမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေကြားရန် ငြင်းဆန်နေသော်လည်း ကျိုတ်လတ် ဒေသခံများနှင့် ပြည်တွင်းဂျာနယ် သတင်းထောက်များက မောင်ဝိတ်၏ ကုမ္ပဏီသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း မတွေ့ရတော့ဟု တညီတညာတည်း ပြောနေကြသည်။နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ဆိုးရွားစွာ ခံခဲ့ရသည့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် ပြည်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ကြီးကြပ်ရမည့် ၀န်ကြီးများ၊ မြို့တော်ဝန် သတ်မှတ်ပေးပြီး စစ်အစိုးရနှင့် ရင်းနှီးသော စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီး ၃၀ ကျော်ကို တာဝန်ခွဲတမ်း ချထားပေးရာ မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစုမှာ ကျိုတ်လတ်တွင် လုပ်ရန် ရွှေမာလာ၊ သော်တာဝင်း ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ခွဲတမ်းရရှိခဲ့သည်။သို့သော် ခေါင်းခါဆေး ဟု လူသိများသော မူးယစ်ဆေးပြားများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား သုံးစွဲမှုဖြင့် အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ကုမ္ပဏီသူဌေး အဖမ်းခံရပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ သိသာစွာ လျော့နည်းသွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများနှင့် ပြည်တွင်းဂျာနယ် သတင်းထောက်များက ပြောသည်။သို့သော်ငြားလည်း မောင်ဝိတ် ကုမ္ပဏီက ဖြေကြားရန် ငြင်းဆန်နေခဲ့သည်။ အခြားတဖက်တွင်လည်း ကုမ္ပဏီများက စိုက်ထုတ်ထားသော ငွေပြန်ပေါ်ရန် မသေချာသည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စစ်အစိုးရ တာဝန်ပေး၍သာ လုပ်နေကြရသော်လည်း လက်တွန့်နေကြသည်။မေလ ၂၅ ရက်နေ့က မောင်ဝိတ်ကိုယ်တိုင်ပင် ကျိုက်လတ်မြို့နယ် လှည်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုမှ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်များ လှူဒါန်းခဲ့သေးသည်။မေ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဘီလီယံကြွယ်သူဌေး အဖမ်းခံလိုက်ရသည်။ သူနှင့် ရင်းနှီးသော အောင်ဇော်ရဲမြင့်၊ မင်းသမီး န၀ရတ်တို့လည်း အလားတူပင် ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှု ခံခဲ့ရသော်လည်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်က အမှုကို ဖွင့်ချခဲ့ပြီးနောက် ၀က်ထီးကန် မူးယစ်ဆေးဖြတ်စခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသလို မင်းသမီး န၀ရတ်ကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ အမှုဖော်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အရ မင်းသား၊ မင်းသမီးများနှင့် ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတမှ နာမည်ကျော်များလည်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။အနုပညာရှင်များကို လက်ရှိအချိန်တွင် ဖမ်းဆီးထားခြင်း မရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက နေပြည်တော်တွင် သတင်းထောက်များကို ဇွန် ၂၆ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ယနေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်တွင် မောင်ဝိတ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ပါလာရာ သူနှင့်အတူ အမှုတွဲဖြစ်သည့် အခြား ၆ ဦးတွင် မလေးရှား နိုင်ငံသားတဦး ပါဝင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။မလေးရှားနိုင်ငံသား ပီတာ၊ မောင်ဝိတ်၊ အောင်မင်း၊ နေထွန်းလွင်၊ ကျော်ဖုန်းနိုင်၊ ကျော်လှိုင်၊ အုန်းသီး (ခ) ကျော်ဝင်းတို့ကို Ecstasy၊ စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့် Ketamine တို့ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခြင်း၊ ဖြန့်ဝေ တိုက်ကျွေးခြင်းတို့ကြောင့် လမ်းမတော်မြို့နယ် ရဲစခန်းက အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်ဟု မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်က ရေးသားထားသည်။မောင်ဝိတ်နှင့် အပေါင်းအပါ (၆) ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် တရားစွဲရဲချုပ်ခင်ရီ လိမ်လည်မှုပေါ်ပေါက်NEJ/ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈မောင်ဝိတ်နှင့် အပေါင်းအပါ (၆) ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါး ၀ယ်ယူသုံးစွဲမှုဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် (၁၀) ရက်တွင် လမ်းမတော်မြို့နယ် ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးကို ကိုးကား၍ ယနေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။၎င်းတို့သည် ၂၀၀၃ ခုမှ စတင်ကာ ၂၀၀၈ ခုအထိ မလေးရှားနိုင်ငံသား Peter Too Huat Haw (ခ) ပီတာထံမှ Ecstasy ဆေးပြားများ အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ စိတ်ကြွဆေးပြားနှင့် Ketamine ဆေးတို့အား ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခြင်း၊ ကုမ္ပဏီနှစ်ပတ်လည်နေ့များနှင့် မွေးနေ့ပွဲများတွင် အခြားသူများအား ဖြန့်ဝေ တိုက်ကျွေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် (၂၆) ရက် နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားမှုနှင့် တရားမ၀င် ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်အချို့နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းက “ကျနော်တို့ အခုအချိန် အနုပညာရှင်တွေကို တယောက်မှ ဖမ်းထားတာမရှိပါဘူး။ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း အခုအချိန်အထိ တရားစွဲထားတာ မရှိပါဘူး” ဟု ပြောဆိုကြောင်း ပြည်တွင်း အပတ်စဉ်ထုတ် ၀ီးကလီး အဲလင်းဗင်းဂျာနယ်နှင့် ဂျာနယ်အများအပြားတွင် ဖြော်ပ ခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကုန်ပိုင်းတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား အောင် ဇော်ရဲမြင့်သည် အနုပညာရှင်များအား တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချမှုဖြင့် နအဖစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက မေလကုန်ပိုင်း၌ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။အနုပညာရှင်များအား မူးယစ်ဆေး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူများမှာ အောင်ဇော်ရဲမြင့်အပါအ၀င် နအဖနှင့် အပေးအယူမျှနေသည့် စီးပွားရေးသမားများလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ အချို့ရုပ်ရှင်လောက နှင့် ဂီတလောကမှ အနုပညာရှင်အချို့ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရကာ ၀န်ခံကတိထိုးရကြောင်း ခိုင်လုံသော အနုပညာသတင်းရပ်ကွက်မှ သိရသည်။ရန်ကုန်မြို့မှ ရွှေကုန်သည်တဦးက “ဒီသတင်းကို ပြည်ပမီဒီယာတွေနဲ့ ရေဒီယိုတွေက ဖော်ပြခဲ့တာ ကြာပြီ။ ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းက ထွက်တဲ့ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာတော့ ရဲချုပ်ခင်ရီက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကို တရားစွဲထားတာ မရှိသေးပါဘူးလို့ ဗြောင်ကျကျ လိမ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဗူးပေါ်သလိုပေါ်ပြီ။ စစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင် လိမ်လည်နေကြတော့ သူတို့ရဲ့သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေကိုရော ဘယ်လိုယုံစားရတော့မှာလဲ” ဟု ထောက်ပြပြောဆိုသည်။အဆိုပါသတင်းတွင် မောင်ဝိတ်နှင့် (၆) ဦးကိုသာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနှင့် အရေးယူထားသည်ဟုသာ ပါရှိပြီး နအဖအဖွဲ့ဝင် ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် (ရဲမြင့်ကြီး) ၏ သား အောင်ဇော်ရဲမြင့် ပါဝင်ပတ်သက် မှုကိုမူ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် မောင်ဝိတ်တို့ နှစ်ဦးသည် ကာလကြာမြင့်စွာကပင် နိုင်ငံခြားဖြစ် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခြင်း ပြုလုပ်သူများဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ဖြန့်ဖြူးပြီး သုံးစွဲသူများတွင် အနုပညာလောကနှင့် စီးပွားရေးသမားသာမက တပ်ချုပ်ကြီး၏မြေး ဖိုးလပြည့်ပါ စမ်းသပ်သုံးစွဲရာမှ အမှုဖြစ်ရန် စတင်လာသည်ဟု စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀န်းမှ သိရသည်။ ။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏သမက် ဗိုလ်မှူးချုပ် ရာထူးတက်(သတင်းသုံးသပ်ချက်)NEJ/ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏သမက် ဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းနိုင်ကို ဗိုလ်မှူးချုပ်ရာထူးဖြင့် မင်္ဂလာဒုံလေတပ် စခန်း ဌာနချုပ်မှူးရာထူး တိုးပေးကြောင်း လေတပ်အရာရှိတဦးက ပြောသော်လည်း ထိုသတင်းကို ခေတ်ပြိုင်က သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။မြန်မာစစ်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်များကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး မကြာခင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ သမက် ဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းနိုင်ကို ဗိုလ်မှူးချုပ်ရာထူး တိုးပေးသည့်သတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မင်္ဂလာဒုံလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်သည် လေတပ်ဦးစီးချုပ် မဖြစ်ခင် တာဝန် ယူရသည့် စခန်းဖြစ်သည့်အတွက် အရေးကြီးသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်း လေတပ်နှင့် နီးစပ်သူများက ပြောသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်များအား အပြောင်းအလဲလုပ်ရာတွင် အငြိမ်းစားပေးသည့် ဗိုလ်ချုပ်များ ရှိသလို အချို့ဗိုလ်ချုပ်များကို နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး သံအမတ် ရာထူး ပေးတော့မည်ဟု သံတမန်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။လတ်တလော အငြိမ်းစားပေးခံရသည့် ဗိုလ်ချုပ်အချို့ကို သံအမတ်ကြီးရာထူးများ ပေးမှာဖြစ်သည့် အတွက် နိုင်ငံခြား မြန်မာသံရုံးများရှိ မြန်မာသံအမတ်များကို မကြာခင် အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်တော့ မည်ဟု ပြည်ပ မြန်မာသံတမန်အသိုင်းအ၀န်းက ပြောသည်။ထိုအတောအတွင်း မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် မောင်ဝိတ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုနှင့် မေ (၃၁) ရက်က ဖမ်းပြီး တရားစွဲဆိုထားကြောင်း DPA သတင်းက ဖော်ပြသည်။ မောင်ဝိတ်သည် မကြာခင်က အငြိမ်းစား ပေးခံရသည့် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် နီးစပ်သူဖြစ်သည်။အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို ဖမ်းထားသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမှုသက်သာအောင် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကတော်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို လျှို့ဝှက်တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက လက်မခံခဲ့ဟု နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်း သားသမီးများ၊ စီးပွားရေးသမားများ မူးယစ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်နေသည်ကို မသိကျိုးကျွန် ပြုထားပြီးမှ ယခုကဲ့သို့ အရေးယူခြင်းမှာ လူထုက နာဂစ် မုန်တိုင်းကိစ္စ မကျေနပ်မှု အာရုံလွဲရန် ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀န်းကို ဓားစားခံလုပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု နေပြည်တော်အရာရှိ အသိုင်းအ၀န်းက ယူဆသည်။နအဖ ၀န်ကြီးနေရာ အပြောင်းအလဲများကို အစိုးရပြန်တမ်းအဖြစ် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်အတွင်း အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင် ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး တာဝန်ရသွားသည့် ပဲခူးတိုင်း တိုင်းမှူးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကိုကို၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးအသစ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝင်းမြင့်၊ စစ်ကိုင်းအခြေစိုက် အနောက်တောင်တိုင်း တိုင်း မှူးအသစ် ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်စိုးတို့ (၃) ဦးကို သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း အခြား အပြောင်းအလဲများကိုမူ ဖော်ပြခြင်း မရှိသေးပေ။ယခု စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူးများအဖြစ် ရာထူးတိုးသွားသည့် တိုင်းမှူးဟောင်းများသည် ယခင် စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူးများကဲ့သို့ နအဖ အဖွဲ့ဝင်ရာထူးများ မရရှိကြောင်း၊ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘိုနှင့် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဝင်းအပါအ၀င် ယခင် ၀ါရင့် ကစထ မှူးများမှာမူ နအဖ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဆက်ပြီး တာဝန်ရထားဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအနေဖြင့် ၎င်း၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို အာဏာ ခွဲဝေပေးလိုက်သည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် တပ်ကို ပိုမိုချုပ်ကိုင်ရ လွယ်ကူအောင် ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်နှင့်နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀န်းများအကြား ပြောဆိုနေသည်။ယခင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားပြီးနောက် ၎င်း၏ ရာထူး (၃) နေရာအနက် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်၊ ထောက်လှမ်းရေးမှူးရာထူးကို ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ရာထူးကို ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦး စသဖြင့် ခွဲဝေ ပေးခဲ့ဖူးသည်။ယခုကဲ့သို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ၎င်း၏သမက်ကို အရေးကြီးသည့် မင်္ဂလာဒုံလေတပ် စခန်း ဌာနချုပ် ရာထူးတိုးပေးခြင်းအားဖြင့် စစ်တပ်အတွင်း ၎င်း၏ အာဏာပိုမိုခိုင်မြဲအောင် လုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀န်းက ဖေန်နေကြသည်။နာဂစ်ဒုက္ခသည်များအတွက် DFID က နောက်ထပ် ပေါင် ၁၇.၅ သန်း လှူတန်းမည်ဆော်လမွန်ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 10 2008 21:57 - မြန်မာစံတော်ချိန်နယူးဒေလီ။ ။ ယူကေနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန (DFID) က ဆိုင်ကလုံးနာဂစ်ဒဏ်ခံ မြန်မာများအတွက် နောက်ထပ် ပေါင်စတာလင် ၁၇.၅ သန်း ထပ်မံပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေညာလိုက်ရာ DFID ၏ စုစုပေါင်း လှူတန်းငွေ ပေါင်စတာလျှင် ၄၅ သန်းရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသာ အဖွဲ့များက ငွေတောင်းခံမှု လုပ်သည့် ယခုကာလတွင် DFID ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ David Leslie က ပြောကြားရာတွင် လှုတန်းငွေများကို ကြာသာပတေးနေ့တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည။်ကုလသမဂ္ဂ ထောက်ပံ့ရေး အေဂျင်စီများနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာမှု အကူညီပေးရေး အဖွဲ့များက နောက်ထပ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ မရှိလျှင် ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရပ်ဆိုင်းသွားဖွယ် ရှိသည်ဟု ပြောနေခဲ့ကြသည်။ကုလစားနပ်ရိက္ခာ ပရိုဂရမ်အဖွဲ့က သူတို့၏ ခြောက်လတာ လည်ပတ်မည့် အစီအစဉ် အတွက် နောက်ထပ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ သန်းလိုသည်ဟု ပြောဆိုနေခဲ့သည်။နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ အသင်းချုပ်ကြီးက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောကြားရာတွင် သူတို့၏ သုံးနှစ်တာကလာ ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၂.၅ သန်း လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူတို၏ အစီအစဉ်များတွင် လတ်တလော အရေးပေါ် လုပ်ဆောင်စရာများနှင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး အတွက်ပါ ပါဝင်သည်။ကြက်ခြေနီအဖွဲ၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ အကြီးအကဲ Alistair Henley က ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ လူထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် နာဂစ်မတိုက်မီ ကာလကပင် မရေရာသောဘ၀တွင် တာရှည် နေခဲ့ကြရသူများ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။"နာဂစ်က သူတို့ကို ပို ချို့တဲ့အောင်၊ ပိုအားနည်းသွားအောင် လုပ်လိုက်တာပဲ။ သူတို့ ဆုံးရှုံးသွားတာလေးလောက်ပဲ ပြန်ရအောင် ကျနော်တို့လုပ်မယ့်အစား သူတို့ရဲ့ အနာဂတ် သာယာလှပ လုံခြုံအောင် ကြံဆောင်သင့်တယ်" ဟု Henley က ပြောသည်။DFID မှ David Leslie ကတော့ အဖွဲ့အနေဖြင့် ကုလနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆိုသည့်အတွက် နောက်ထပ် ငွေထုတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။DFID ၏ အတွင်းရေးမှူး Douglas Alexander က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေညာချက်တရပ်တွင် ပြောကြားရာတွင် " ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းတွေ ပို့ဆောင်နိုင်မှု တောက်လျှောက် မြင့်လာနေပြီး အချက်အလက် ရရှိမှုတွေ တိုးတက်မှု ရှိလာနေပေမယ့် မကြာခင်ကာလမှာ နောက်ထပ် အထောက်အပံ့တွေ မရဘူးဆိုရင် လူပေါင်း ၃ သိန်းလောက်အတွက် အန္တရာယ် ရှိနေတယ်လို့ ကျနော်တို့တော့ ယုံတယ်" ဟု ပြောသည်။"ဒီနေ့ လုပ်တဲ့ ငွေတောင်းခံမှုမှာ ဘာတွေပါမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ငွေကို ဘယ်လို အသုံးချလဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်မယ်လေ""မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ စာရင်းကောက်အဖွဲ့ ရှိတယ်။ သူတို့က ဘယ်အဖွဲ့တွေ ငွေလိုနေတယ်ဆိုတာ ကြည့်နေတာ" ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။မေ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့ကို နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်သွားခဲ့ရာ လူပေါင်း ၁၃၈၀၀၀ သေဆုံး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၂.၄ သန်းကျော်၏ ဘ၀များ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ခဲ့သည်။သဘာဝကပ်ဘေးဖြစ်အပြီး DFID က ချက်ခြင်းပင် ပေါင်စတာလင် ၅ သန်းကူညီမည်ဟု ကြေညာပြီး မေ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နောက်ထပ် ပေါင်စတာလင် ၁၂ သန်း ထပ်မံ ပေးပြန်သည်။ ရန်ကုန်တွင် မေ ၂၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ-ကုလ-စစ်အစိုးရ အစည်းအဝေးအပြီး နောက်ထပ် ပေါင်စတာလင် ၁၀.၅ သန်း ပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီ ရရှိရေးအတွက် တောင်းခံရာတွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံနီးပါး လိုမည်ဟု ပြောဆိုထားသော်လည်း လိုအပ်သည့် အရေအတွက် ရရန်မှာ အလှမ်းဝေးလွန်းနေသေးသည်။နာမည်ကြီး စီးပွားရေးသမားနှင့် အပေါင်းအပါ ၆ ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနှင့် တရားစွဲပြီအေးချမ်းမြေ့/ကြည်ဝေ ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၀၈ရန်ကုန်မြို့မှ နာမည်ကြီး လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်သူ မောင်ဝိတ်နှင့် အပေါင်း အပါ ၆ ဦးတို့ကို အက်တာစီ ဆေးပြား သုံးစွဲ ဖြန့်ချိမှုဖြင့် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီး အရေးယူလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၁၁ - ၁၇ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။မောင်ဝိတ်နှင့်အတူ အဖမ်းခံရသူတို့မှာ မလေးရှားနိုင်ငံသား Mr Peter Too Huat Haw၊ မောင်နေထွန်းလွင်၊ မောင်အောင်မင်း၊ မောင်ကျော်ဖုန်းနိုင်၊ မောင်ကျော်လှိုင်၊ မောင်ကျော်ကျော်ဝင်း တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို လမ်းမတော် ရဲစခန်းက မယ (ပ)၂/၀၈၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၅/၁၆ (င)/၂၁ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း သိရသည်။“မောင်ဝိတ်ကို မဖမ်းမဖြစ်တော့လို့ ဖမ်းလိုက်ရတယ်လိ်ု့ ကြားတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း ထောင်ဒဏ် ချမယ်ဆိုရင် ၁၀ နှစ်ကနေ တသက်တကျွန်းထိ ချရမှာပဲ။ မောင်ဝိတ်က စစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူ ဆိုတော့ သူတို့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ မသိဘူး” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင် တဦးက သုံးသပ်သည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌လူပြောများနေသော သတင်းများအရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မြေး ဖိုးလပြည့် အထက်ဖော်ပြပါ အက်တာစီ မူးယစ်ဆေးပြား သုံးစွဲနေသည်ကို ၎င်း၏မိဘများ သိသွားခဲ့ရာမှစ၍ မူးယစ်ဆေး ဖြန့်ချိသူများနှင့် အဆက်အစပ် ရှိသူအားလုံးကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးသဖြင့်ယခုကဲ့သို့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်၏ သားဖြစ်သူ အောင်ဇော်ရဲမြင့်၊ မောင်ဝိတ် စသည့် စစ်တပ် အကြီးအကဲများနှင့် နီးစပ်သူများကိုပါ မဖြစ်မနေ အရေးယူရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယင်းမူးယစ်ဆေးပြားကို အများဆုံး သုံးစွဲသူများမှာ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ သားသမီးများ ဖြစ်သည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ ဆေးပြားတပြား၏ တန်ဖိုးမှာ ကျပ် ၆ သောင်း ဝန်းကျင်ရှိသောကြောင့် လူချမ်းသာ သားသမီးများသာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဖိုးလပြည့်အပါအဝင် စစ်တပ်အကြီးအကဲများ၏ သားသမီးများပါ မူးယစ်ဆေးကိစ္စနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသဖြင့် အသေးစိတ် လိုက်လံစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် မောင်ဝိတ်နှင့် အပေါင်းအပါ ၆ ဦးကိုအမှုဖွင့် အရေးယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။မောင်ဝိတ်သည် မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစု ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ထားသူဖြစ်ပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကြီး များနှင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်လျှက် ရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးအဖြစ် ထင်ရှားသူ ဖြစ်သည်။“မောင်ဝိတ်က စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူတူ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတာ။ ပြီးတော့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေအတွက် ဖြန့်ပေးနေတာ” ဟု ရန်ကုန် အခြေစိုက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် မောင်ဝိတ်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မလေးရှား နိုင်ငံသား Mr Peter Too Huat Haw ထံတွင် အက်တာစီ ဆေးပြားများ ၀ယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ရုံမက ကုမ္ပဏီနှစ်ပတ် လည်နေ့များ၊ မွေးနေ့ပွဲများတွင် တခြားသူများ ကိုပါ ဖြန့်ဝေတိုက်ကျွေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူ ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်း မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။“သူတို့က ရုံးခန်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေကို ဖ်ိတ်ပြီး ပါတီတွေ ကျင်းပကြတယ်။ ပြီးတော့ လာသမျှလူတွေကို မူးယစ်ဆေးဝါး အခမဲ့သုံးစွဲဖို့ ဒီတိုင်းချပေးထား တာ။ စွဲပြီဆိုတော့မှ စရောင်းတာ” ဟု ထိုပါတီပွဲများသို့ ရောက်ဖူးသည့် မောင်ဝိတ်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးကပြောပြသည်။မောင်ဝိတ်နှင့် ၎င်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖော် အပေါင်းအပါများသည် မူးယစ်ဆေးစွဲနေသော ရုပ်ရှင်မင်းသမီးများ၊ မော်ဒယ် များကို စစ်တပ်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ၎င်းတို့၏ သားများနှင့် လိင်ဆက်ဆံရန် တွန်းအားပေးကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။သို့ရာတွင် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့် တရားမ၀င်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာတွင်မူ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင် တချို့နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်း မရှိဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထို့ပြင် အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ် ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ အခြေခံ စာရင်း ကောက်ယူမှုအရ သုံးစွဲသူများ လျော့ကျသွားသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ ဦးရေ ၆၁၄၅၅ ရှိရာမှ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအထိ စာရင်းကောက်ယူမှုအရ ၅၄၇၀၅ ဦးသာ ရှိတော့သည်ဟု ဆို၏။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါးမှုများမှာ ဧပြီလအထိ အမှုပေါင်း ၇၅၀ ရှိပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထဲတွင် အမျိုးသား ၉၀၉ ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၂၁၀ ဦးဖြစ်သည်ဟု မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်း အမှု များထဲမှ ၄၆၃ မှုကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီး ဖြစ်ကာ ထိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီ်းသည့်ထဲတွင် ဆယ်နှစ် အောက် အမျိုးသား ၂၇၈ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၄၉ ဦး၊ ၁၀နှစ် အထက် ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူ အမျိုးသား ၂၄၂ ဦး၊ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိကျခံရသူ ၁ ဦး၊ တသက်တကျွန်း ကျခံရသူ ၂ ဦးတို့ ပါရှိကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖြန့်ချိခြင်း စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်လျင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် နှင့် တသက်တကျွန်းထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ် ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း များ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသည်။၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးကို ပုဒ်မ ပြောင်းတပ်ကိုစိုး ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၀၈ထင်ရှားသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုကိုကြီးကို စစ်အာဏာပိုင်များက ဆက်လက် ချုပ်နှောင်ထားရန် တရားစွဲဆိုသည့် ပုဒ်မပြောင်းလဲ လိုက်ကြောင်း မိသားစုဝင် တဦးကပြောသည်။ယမန်နေ့က ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရာတွင် ၎င်းအား ယခင် ပုဒ်မ ၃၃(က) မှ ယခု ပုဒ်မ ၁၇(၁) သို့ ပြောင်းလဲ လိုက်သည် ကို အာဏာပိုင်များက ယခုလဆန်းက အသိပေးခဲ့သည်ဟု ကိုကိုကြီးကပြောကြောင်း ညီဖြစ်သူ ကိုအောင်ထွန်းက ပြောပြသည်။“အခု ဒီ ပုဒ်မကိုပြောင်းတာ လဆန်း ၃ ရက်နေ့လောက်က သူ့ကို ခေါ်ပြောတာတဲ့၊ မနေ့က ကျနော် သူနဲ့ သွားတွေ့တော့ သူကျနော့်ကို ပြောတာ၊ ဘာဖြစ်လို့ ပြောင်းတာလဲလို့မေးတော့ ပြည်ပြေးအစိုးရ အန်စီဂျီယူဘီ တို့၊ ပြည်သစ်ညွန့်ဝေ ခေါ် မောင်မောင်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ဆိုပြီးပြောတယ်တဲ့”ဟု ကိုအောင်ထွန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ကိုအောင်ထွန်းက ဆက်လက်ပြီး“သူတို့ကို ထောင်ထဲမှာပဲ အထူးခုံရုံးဖွဲ့ပြီး စစ်တာ၊ ခွေးတိုက်ကို ရှင်းလင်းပြီး ခုံရုံး လုပ်ထားတာ၊ အဲဒီလိုစစ်တာ အခုဆိုရင် စဖမ်းတုန်းက ပုဒ်မ ၁၇/၂၀ ကနေ စလိုက်တာ ၄-၅ ကြိမ် ရှိပြီထင်တယ်” ဟုလည်း ပြောသည်။ပုဒ်မ ၁၇ (၁) သည် မတရားအသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပုဒ်မဖြစ်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ကျခံ ရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်း အဆမတန်ကြီးမြှင့်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော ကိုကိုကြီးအပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဇေယျ၊ ကိုကျော်ကျော်ထွေး၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်၊ ကိုပဏ္ဍိတ်ထွန်း၊ ကိုသက်ဇော် ၊ ကိုဥာဏ်လင်းထွန်းနှင့် ကိုဇော်ဇော်မင်းတို့အား စစ်အစိုးရက ဆူပူမှုဖြစ်ရန် လှုံ့ဆော်သည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ၂၀၀၇ ခု နှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းသို့ စတင်ဖမ်းဆီးချိန်က ၎င်းတို့အား အာဏာပိုင်များက ပုံနှိပ် ဥပဒေ ၁၇(၂၀) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က “ဲမကြာသေးခင်က တခြားလူတွေကိုလည်း ပုဒ်မ ပြောင်းလိုက်တယ်၊ ကိုနေဘုန်းလတ်ကိုလည်း ဗီဒီယို ပုဒ်မကနေ တခြား ပုဒ်မကို ပြောင်းလိုက်တယ်၊ ဒီလို ပုဒ်မ ပြောင်းပြောင်းနေတာက ဖမ်းထားပြီးတော့ အမှုစစ် တာတွေ ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ သူတို့ကို ဖမ်းထားနိုင်ဖို့ ၊ ဒီလူတွေကို အမိန့်ချဖို့အတွက် သူတို့ဆီမှာ အဆင်သင့် အမှုဆင်နေ တာကြီး တခုက မပြီးပြတ် သေးပုံရတယ်၊ ဒီလူတွေကို ဆက်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့အတွက်က အဲဒီလို ပုဒ်မ ခုပြီး တခု ပြောင်းနေမှ ချုပ်ထားလို့ရမှာ”ဟု ပြောသည်။ယခုအပတ်အတွင်းတွင် ဘလော့ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်ကိုလည်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဗီဒီယို ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတော် အကြည်အညိုပျက်စေမှု ၅၀၅ (ခ) ပုဒ်မတို့ဖြင့် အာဏာပိုင်များက တရားစွဲဆိုကြောင်း သိရသည်။ ကိုနေဘုန်းလတ်သည် ၎င်း၏ ဘလော့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေပုံ ကာတွန်းကို တင်ထားသည့်အတွက် အရေးယူခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ထို့အတူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား ရည်ရွယ်သော ကဗျာ ရေးသားသူ ကဗျာဆရာ စောဝေကိုလည်း လွန်ခဲ့သော ဇန်န၀ါရီ လအတွင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။တချိန်းတည်းတွင် အကျဉ်းကျနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထံမှ အနက်ရောင်အ၀တ်အထည်များကို အစိုးရဆန့်ကျင် သည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်ဝတ်ဆင်မည်ကို မလိုလားသောကြောင့် ထောင်အာဏာပိုင်များ သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း ထောင်ဝင်စာတွေ့ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုများက ပြောဆို သည်။“အခုအပတ် ကျမအကိုကို သွားတွေ့တော့ ထောင်ထဲက အနက်ရောင်အ၀တ်တွေကို လက်မခံဘူးဆိုပြီး၊ နောက်တခါလာရင် တခြားအ၀တ်တွေယူခဲ့ဖို့ပြောတယ်”ဟု ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် မှ ကိုကျော်ကိုကို ၏ ညီမ ဖြစ်သူကပြောပြသည်။၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကိုမတရားသင်းဆက်သွယ်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲတရားစွဲပီတာအောင်/ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို မတရားသင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇/၁ ဖြင့် ပြောင်းလဲ ယမန်ယူလိုက်ကြောင်း ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့သည့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦး၏ မိသားစုမှ ပြောသည်။အမည်မဖော်လိုသူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူက “အခုပြောင်း လိုက်တာ ပုဒ်မ ၁၇/၁ တဲ့။ (၃) ရက်နေ့က ယမန်ပြန်ယူတာပေါ့။ မတရားသင်း ဆက်သွယ်မှုလို့ ပြောတယ်။ အကုန်လုံးကို ပြောင်းလိုက်တာ။ ရုံးချိန်းကို အပြင်မထုတ်ဘူး။ ထောင်ထဲမှာပဲ ယမန် ယူလိုက် ချုပ်လိုက်၊ ယမန်ယူလိုက် ချုပ်လိုက်နဲ့။ အပြင်မထွက်တဲ့အခါကျတော့ ရှေ့နေနဲ့လည်း မတွေ့ရဘူး။ သူတို့က ငါတို့ကို ပုဒ်မ ဘယ်လောက်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုမှပဲ သိရတာ” ဟု ပြောသည်။မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုအံ့ဖွယ်ကျော် စသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းလျော့ချပေးရေး ဆန္ဒပြမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယမန်နှစ် သြဂုတ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။၂၀၀၈ ဇန်န၀ါရီလကုန်ပိုင်းတွင် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇/၂၀ ဖြင့် ၎င်းတို့ကို စတင် ယမန်ယူကာ တရားစွဲခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း၌ အမျိုးသားညီလာခံအား ဆန့်ကျင် နှောင့်ယှက်သည့် ဥပဒေ ၅/၉၆၊ တရားမ၀င် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ကိုင်တွယ်မှု ဥပဒေ ၃၃ (က) တို့ဖြင့် ပြောင်းလဲ ယမန်ယူပြီး ယခု ထပ်မံ ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းကဲ့သို့ ယမန်အမျိုးမျိုးယူ၍ ထောင်ချထားခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေသမိုင်း၌ အစဉ် အလာမရှိဘဲ တရားဥပဒေနှင့်လည်း ညီညွတ်မှုမရှိဟု ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား အမှုလိုက်ပေးနေသည့် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။၎င်းက “ ဒီလိုပုဒ်မတွေ ပြောင်းပြောင်းပြီး ယမန်ယူပြီးတော့ ချုပ်ထားတာ ကျနော်တို့ ဗမာပြည် တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ရှိလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ပုဒ်မပေါင်းများစွာရှိတာ၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မဆို (၅၀၀) ကျော်ရှိတာ၊ တခုပြီးတခု အဲလိုသာ လှည့်စွဲနေရင် တသက်လုံး တောင် ထွက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ အင်မတန်ရှားပါးတဲ့ အတွေ့အကြုံတခုပဲ။ ရှိလည်းမရှိဘူး။ ဥပဒေအရလည်း ခွင့်ပြုထားတာ မရှိဘူး” ဟု ပြောသည်။ယခုပြောင်းလဲလိုက်သည့် မတရားသင်းဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မအရ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်ထိ ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်နိုင်သည်။ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် သီးသန့်ဆောင်၌ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် သည် မျက်စိဝေဒနာခံစားနေရပြီး ကိုကိုကြီးသည် သွေးတိုးနှင့် ကျီးပေါင်းရောဂါများ ဖြစ်နေသဖြင့် မိသားစုဝင်များ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြကြောင်း သိရသည်။အခြား ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်သားများဖြစ်သည့် မခင်မိုးအေး၊ ကိုကျော်စိုးနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်း ရေး ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ကိုထင်ကျော်တို့ကိုလည်း ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံး၌ရုံးထုတ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေက ပြောသည်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအား စစ်အစိုးရက ပုဒ်မမျိုးစုံတတ်၍ အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီး တရား စွဲလျက်ရှိရာ လတ်တလော အမှုသည်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ရှိပြီး အမှုပေါင်းမှာ (၃၀) ကျော် ရှိသည်ဟု ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။ ။နေဘုန်းလတ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ဖနိဒါကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 10 2008 17:08 - မြန်မာစံတော်ချိန်“ပုဒ်မ ၅ ည မပါဝင်”ချင်းမိုင်။ ။ စာရေးဆရာ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်အား ယခုလ ၈ ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ပြီး နောက်ထပ် စွဲဆိုချက်များ တိုးမြှင့်ကြောင်း တရားရုံးက အသိပေးလိုက်သည်။အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ကိုနေဘုန်းလတ် ခေါ် ကိုနေမျိုးကျော်အား အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ အမှတ် ၂ တရားရုံးတွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒုခရိုင်တရားသူကြီးက သီးသန့်ရုံးထိုင်ကာ ဗီဒီယို အက်ဥပဒေ ၃၂ (ခ) ဖြင့်သာ မဟုတ်ဘဲ အခြားပုဒ်မများဖြင့်ပါ တရားစွဲဆိုကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။တရားရုံးက အစိုးရ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက် ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ (ခ)/၃၆၊ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ ၃၃ (က)/၃၈ တို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း ကိုနေဘုန်းလတ်၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ကမူ အရေးပေါ် စီမံချက် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (ည) သို့ ပြောင်းလဲ တရားစွဲခဲ့ကြောင်း ထောင်အာဏာပိုင်များက ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ထောင်တွင်း လာရောက် ပြောကြားခဲ့သဖြင့် ၇ ရက်နေ့ ထောင်ဝင်စာ တွေ့သည်အခါ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးသန်းက ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ပြန်လည် ပြောကြား အသိပေးခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် ထိုစဉ်က သတင်းများတွင် ကိုနေဘုန်းလတ်ကို စွဲဆိုထားသော အမှု ပြောင်းလဲသွားပြီဟု ပါရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်တရက် ရုံးချိန်းတွင်မူ တရားသူကြီးက ကိုနေဘုန်းလတ်၏ အမှုနှင့် စွဲချက်များကို အသိပေးပြောကြားရာတွင် အရေးပေါ် စီမခံချက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (ည) မပါဝင်တော့ဘဲ အခြားသော နောက်တိုး စွဲချက်များသာ ပါလာခြင်း ဖြစ်သည်။ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အာဏာပိုင်များက ကိုနေဘုန်းလတ်အား ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် ဗီဒီယို အက်ဥပဒေ ၃၂ (ခ) ဖြင့်သာ စွဲချက်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။သူက “အန်တီတို့ သွားတွေ့ခဲ့တာ ၇ ရက်ကပေါ့နော်။ ပုဒ်မပြောင်းတယ်လို့ပဲ ကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်။ ၈ ရက်နေ့ကျတော့ ရုံးထုတ်မယ်ဆိုပြီး အန်တီတောင် အံ့သြသွားတာပေါ့နော်။ အဲဒါ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်း နားမလည်တော့ဘူးကွယ်။ ပထမ ၂ ရက်နေ့မှာ သားကို လာပြောတယ်။ ပုဒ်မ ၅ (ည) က ပြန်မတပ်တော့ဘူး။ ၁၆ ရက်နေ့ ထပ်ချိန်းလိုက်တယ်။ ထုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရမန်ပဲ ယူလိမ့်မယ်လို့ သားက သေချာပြောလိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ ၈ ရက်နေ့ကျတော့ ရုံးထုတ်တယ်လေ။ ပုဒ်မ သုံးခု တပ်လိုက်တယ်ဓ ဟု ဒေါ်အေးအေးသန်းက အံသြစွာဖြင့် ပြောသည်။ကိုနေဘုန်းလတ်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဒဂုံမြို့နယ်မှ မသင်းဂျူလိုင်ကျော်ကိုလည်း အစိုးရ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ (ခ)/၃၆ တို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း သိရသည်။မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှ လယ်လုပ်သားများ အချိန်မီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခက်ကြုံတင့်လွင်/ဘိုကလေး ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၀၈နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတချို့တွင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် ငွေကြေးကြွယ်ဝသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ချယ်လှယ်မှုတို့ကြောင့် လယ်သမားများ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့နေ ရကြောင်း သိရသည်။ရာသီချိန်အမီ စပါးစိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ထွန်ယက်နေသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ် လယ်သမားတဦး (ဓာတ်ပုံ - တင့်လွင်/ဧရာဝတီ)လယ်ယာလုပ်ငန်းများ အချိန်မီလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာနှင့် စက်သုံးဆီများအဆင်ပြေပြေမရရှိသေးသကဲ့ သို့ မျိုးစပါးအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြခြင်း၊ မျိုးစပါးလှူဒါန်းသူများ ကစေတနာဖြင့် လှူကြသော်လည်း ဒေသ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လယ်သမားများထံသို့ စပါးပေါ်ပေးစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးနေခြင်းတို့ကို အလှူရှင် များနှင့် လယ်သမားများက ပြောသည်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းခန့်က ၄င်းဒေသသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သောမျိုးစပါး အလှူရှင်တဦးက“ကျမတို့က အပြတ်လှူလိုက်တာ၊ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမပါဘူး။ စပါးလာယူတဲ့လယ်သမားက ကျနော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြန်ပေးရမလဲလို့ မေးလိုက်တော့ နည်းနည်း အံ့သြသွားတယ်။ နောက်တော့မှသိရတာက အဲဒီရွာက ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေက လယ်သမားတွေနဲ့ အစကတည်း က စပါးပေါ်ရင်ပြန်ပေးရမယ်လို့ ညှိထားတာတဲ့” ဟု ပြောသည်။အဆိုပါအလှူရှင်က ၄င်းဒေသရှိဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟုသိရသည်။ကျေးရွာတွင်ရှိသော ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ကျေးရွာလူကြီးများက ၄င်းတို့ထံလာရောက်လှူဒါန်းသော အလှူရှင်များ အား လယ်သမားများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ လှူဒါန်းခွင့် ပေးခဲ့သော်လည်း အလှူရှင်များမလာရောက်မီ သို့မဟုတ် အလှူရှင် များ ပြန်သွားသည့်အချိန်တွင် စပါးပေါ်လျှင်ပြန်ပေးရမည်ဟု ပြောထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဘိုကလေးမြို့နယ် စက်ဆန်း ကျေးရွာ အုပ်စုမှ လယ်သမားတဦးကလည်း ပြောသည်။“ကျနော်တို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လာကူညီတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲကူညီ ကူညီ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ အလကားမပေးလဲ ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းဆက်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်”ဟု ၎င်းလယ်သမားက ပြောသည်။ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များက ၎င်းတို့စက်များတွင်လာမကြိတ်ဘဲ စပါးပွဲစားများထံသို့ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော လယ်သမား ကိုလည်း အငြိုးဖြင့် အကူအညီမပေးဘဲထားသည်ဟု ဒေသခံ လယ်သမားများကပြောကြသည်။ယင်း ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များက လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများကို အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြလျှောက် ထားပြီး ၄င်းတို့ဆန်စက်များသို့ စပါးလာရောက် ကြိတ်ခွဲလေ့ရှိသော လယ်သမားများကို စပါးပေါ်လျှင် ၄င်းတို့စက်များ သို့လာရောက် ကြိတ်ခွဲရမည်ဟူသော ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကူညီမှုများရှိကြောင်း လယ်သမားများက ပြောသည်။လယ်သမားအများစုမှာ မြို့ နှင့်အဆက်အသွယ်နည်းပါးသောကြောင့် အစိုးရက လယ်ထွန်စက်များ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းပေးချိန်တွင်လည်း ကျေးရွာအာဏာပိုင်များနှင့်ရင်းနှီးသူများ၊ မြို့ပေါ်မှလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိ သူများမှလွဲပြီး မသိရှိကြဘဲ သိရှိချိန်တွင် စက်များ ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်ဟု လည်း လယ်သမားများကပြောကြသည်။စက်သုံးဆီဖြန့်ဝေရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူကြီးများနှင့်ရင်းနှီးသူများက အမှန်တကယ်ရှိသောလယ်ယာမြေထက် စာရင်း ပိုပြ၍ ထုတ်ယူကြသောကြောင့် အခြားလယ်သမားများမရကြပေ။စက်ဆန်းကျေးရွာအုပ်စု အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာမှလယ်ဧက ၇၀ ခန့်ပိုင်သည့် လယ်သမားတဦးက“ ဒီဇယ်ဆီပေးတယ် ဆိုလို့ ဘိုကလေးကိုသွားတာ နှစ်ခေါက်ရှိပြီ်။ ဟိုရောက်တော့ ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ပေးလဲတော့ မသိဘူး။ သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့ စက်လှေခတွေသာကုန်သွားတယ်။ ခုထိဘာမှမရသေးဘူး”ဟု ပြော သည်။အစိုးရ က ဒီဇယ်ဆီ တဂါလန် ကျပ် ၃၀၀၀ ဖြင့် လယ်ဧက အလိုက်ရောင်းချပေး၍ ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာ တဂါလန် ကျပ် ၆၂၀၀ ဟုသိရသည်။ဒီဇယ်ဆီရောင်းပေးခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဘိုကလေးမြို့ပေါ်မှ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ကြီးတဦးက“ကျနော်တို့က အားလုံး အဆင်ပြေ ပြေဖြစ်အောင် စက်တွေရောင်းပေးဖို့ အာမခံထားရတာ။ ကျနော်တို့နဲ့မသိတဲ့လူကိုတော့ အာမ မခံပေး နိုင်ဘူး။ စပါးထွက်မှ အားလုံးလုပ်ငန်း လည်ပတ်နိုင်မှာမို့လို့သာ လိုက်လုပ်ပေးရတာ။ တကယ်လို့ သူတို့တွေ (အာမခံပေးထားသော လယ်သမား) ပြန်မပေးရင် ကျနော်တို့က ကြားထဲကစိုက်လျော်ပေးရမှာ” ဟု ပြောသည်။လယ်ထွန်စက်များရောင်းချပေးရာတွင်လည်း လယ်ဧက ၅၀ အတွက် ထွန်စက်တစီးနှုန်းသတ်မှတ်ရောင်းချပေးသဖြင့် လယ်ဧကအနည်းငယ်သာပိုင်သောလယ်သမားများမှာ ထွန်စက်ငှားထွန်ကြရသည်။ တချို့လယ် သမားများက လုပ်ကိုင် နိုင်သူများကို လယ်ပေးလုပ်ပြီး ပိုင်ရှင်က တဧက စပါး ၁၀ တင်းသာပြန်ယူသည်။ ဒီဇယ်ဆီကို အစိုးရဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ယ်ယူ ရန်ပင် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများရှိကြောင်း သိရသည်။၀ါဆိုလပြည့်နေ့ (ဇူလိုင် ၁၇) နောက်ဆုံးထားပြီး မျိုးစပါးစတင်စိုက်ပျိုးနိုင်မှသာ ယခုနှစ်ဆန်စပါးရာသီအတွက် အောင် အောင်မြင်မြင်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် လယ်မြေဧက စုစုပေါင်း ၃၀၇၆၂ ဧက အနက် ယခုနှစ် တွင် ဧက ၁၅၀၀၀ ကျော်ကျော်ခန့်သာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူကြီးဟောင်း တဦးက ခန့်မှန်းပြောဆို သည်။ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်မူ ဇူလိုင်လ ၃ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူရရှိသောစာရင်းအရ မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှ မိုးစပါး စိုက်ဧက ၁သန်းကျော် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသော် လည်း ပျက်စီးသည့် ဧရိယာ ဧကကိုမူဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကွမ်းခြံကုန်းနှင့် ဒေးဒရဲအပိုင် ကျေးရွာ တချို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် အလှူရှင်တဦးက မျိုးရပြီးစိုက်ပျိုးပြီးသည့် ဧရိယာမှာ ထက်ဝက် မကျော်သေးဟု အဆိုပါ ဒေသခံလယ်သမားများ ကပြောဆိုသည်ဟု ပြောသည်။ [ကရင်နီဒုက္ခသည် လေးထောင်ခန့် တောတွင်း၌ ပုန်းအောင်းနေဧရာဝတီ ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၀၈ကရင်နီလူမျိုး လေးထောင်ခန့်သည် မိမိတို့ရပ်ရွာကိုစွန့်ခွာ၍ လွိုင်ကော်မြို့ တောင်ဘက် ၉၄ ကီလိုမီတာ အကွာတွင်ရှိသည့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်အနီး တောတွင်း၌ ပုန်းအောင်းနေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကရင်နီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။ကရင်နီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သည့် ဒန်နီယာက အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တောတွင်း ၌ပုန်းအောင်းနေသည့်ဒုက္ခသည်များ၏ နေရေး၊ ထိုင်ရေး ပိုမိုခက်ခဲ့လာလိမ့်မည်ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ဒုက္ခသည်အချို့သည် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသအထိ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လိုကြသော်လည်း လမ်းခရီးတလျှောက်တွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု ဒန်နီယာက ဆက်ပြောသည်။ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစ၍ မြန်မာ့ခြေမြန်တပ်ရင်းများဖြစ်သည့် ၄၂၇၊ ၄၂၈ နှင့် ၃၃၇ တို့သည် ဖားဆောင်းဒေသအတွင်း ကရင်နီသူပုန်တပ်များနှင့် တိုက်ပွဲ ၆ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကရင်နီ ဒုက္ခသည်ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဖိုးဗျားရှေးရယ် က ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစ၍ ဒုက္ခသည် ၁၆၀ ကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။တောတွင်း၌ လတ်တလောရှောင်ပုန်းနေရသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖိုးဗျားရှေးရယ်က “သူတို့အုပ်စုထဲကတော့ ဒုက္ခသည် စခန်းကို တယောက်မှရောက်မလာသေးဘူး။ နောက်မှရောက်လာရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းရှိ ကရင်နီဒုက္ခသည်တချို့သည် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (ကေအန်ပီပီ) ကို အာပေး ထောက်ခံသည်ဟု စစ်အစိုးရနှင့် ကရင်နီပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (ကေအန်ပီအယ်လ်အက်ဖ်) တို့က စွပ်စွဲခြင်းကို ခံရသည်ဟု ဖိုးဗျားရှေးရယ်က ဆက်ပြောသည်။ကေအန်ပီပီသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး နောက်သုံးလအကြာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က ကေအန်ပီပီနယ်မြေအတွင်း ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သောကြောင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပျက်ပြားခဲ့သည်။၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်းက ကေအန်ပီပီအနေနှင့် နှစ်ဘက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ဆက်သွယ်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ရာထူးမှဖြုတ်ချခံရပြီးနောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ကရင်နီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ပြုစုထားသည့် စာရင်းများအရ ကရင်နီဒေသအတွင်း စစ်အစိုး၏ ထိုးစစ်များကြောင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ရပ်ရွာကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ ကရင်နီဒုက္ခသည် ခြောက်ထောင်ခန့် ရှိသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း နှစ်ခုတွင် ကရင်နီဒုက္ခသည် နှစ်သောင်းကျော် ခိုလှုံလျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။မြန်မာမုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရ ထပ်မံလှူဒါန်းDFID/ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရက ပေါင်စတာလင် (၁၇) သန်းခွဲ ထပ်မံကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန (DFID) ၀န်ကြီး ဒေါက်ကလပ်စ် အလက်ဇန်းဒါး ယမန်နေ့က ကြေညာလိုက်သည့်အတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရက နာဂစ်ဒုက္ခသည်များအတွက် ပေးအပ်ငွေ ပေါင်စတာလင် (၄၅) သန်း ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလှူရှင် နိုင်ငံများထဲ၌ အများဆုံးကူညီသည့် နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ယခုကြေညာချက်သည် ကုလသမဂ္ဂက နာဂစ်ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူညီ ထပ်မံတောင်းခံမှု တရပ်အား အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယော့ခ်တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်ရန်ရှိသည်ကို ကြိုတင်တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်ကလပ်စ် အလက်ဇန်းဒါးက ပြောသည်။ဒေါက်ကလပ်စ် အလက်ဇန်းဒါးက “အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့များအနေနဲ့ ရန်ပုံငွေ ပြတ်လပ်မှုနဲ့ ကြုံနေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ အခုပေးမယ့် ပေါင်စတာလင် (၁၇) သန်းခွဲကြောင့် အကူအညီဖြန့်ဝေရေး လမ်းကြောင်းတွေ ကောင်းမွန်လာပြီး နေစရာ၊ စားစရာ၊ ရေ၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ ကာကွယ်ရေး စတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ထို့အပြင် ကူညီရေးအတွက် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် အခြေအနေများ တိုးတက်လာခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ပိုမိုဖြန့်ဝေလာနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အကူအညီများ အလျင်အမြန် ထပ်မံမရောက်ပါက ဒုက္ခသည် (၃၀၀,၀၀၀) ဦးခန့်သည် ဆိုးရွားသော အခြေ အနေဖြင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ထပ်မံပေးအပ်မည့် အကူအညီငွေများကို ၀င်ငွေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လယ်ယာမဲ့ လယ်သမားများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ငါးဖမ်းလုပ်သားများ အပါအ၀င် ပြန်လည်စတင်ရန် အရေးပေါ် လိုအပ်နေသူများ အတွက် ကနဦး ပြင်ဆင်ပြုစု ပျိုးထောင်ရေး၊ အလုပ်ရှာဖွေနေရာချထားရေး စသည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် ဦးစားပေး အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။DFID မှပေးအပ်ခဲ့သော အကူအညီများကို ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ကူညီရေးအဖွဲ့များအပါအ၀င် ဒုက္ခသည် (၁) သန်းကျော်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ယမန်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်စမ်းစမ်းအောင်နှင့် ခေတ်ပြိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင် ရွှေကြေးစည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဒေါ်စမ်း စမ်းအောင်သည် မကြာခင်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်စမ်းစမ်းအောင်နှင့်အတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်းနှင့် ဒေါ်ကျင်ကျင်ဝင်းတို့လည်း လိုက်ပါလာသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်စမ်းစမ်း အောင်အား လွတ်မြောက်နယ်မြေ ထွက်လာသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို မေးမြန်းရာ ဒေါ်စမ်းစမ်း အောင်က ယခုကဲ့သို့ စတင်ဖြေသည်။ဖြေ။ ။ နအဖရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ (၉၂) ရာခိုင်နှုန်း သူတို့ရတယ်။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်တော့မယ် ဆိုတာကို အန်တီတို့ ကြိုသိတယ်။ ဒါတွေပြီးအောင် စောင့်ကြည့်ပြီးမှ အန်တီတို့ ထွက်လာတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စရယ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ကိစ္စ၊ မေ (၂၇) ရက် ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ အစ်မ ထိန်းသိမ်းခံရတာ (၅) နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးကို စောင့်ပြီးတော့မှ ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ မခံနိုင်တော့လို့ အရင်ကတည်းက ထွက်လာဖို့ရှိတယ်။ မေလအတွင်းမှာ အစ်မ လွတ်လိုလွတ်ငြား စောင့်နေခဲ့တာပါ။ မလွတ်မှန်းတော့ သိပါတယ်။မေ (၂၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်က ထွက်လာပြီး ဒီကို ဇွန် (၂) ရက်နေ့မှာ ရောက်ပါတယ်။မေး။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ဘာတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၁၉၈၉ ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ လုပ်လာခဲ့တယ်။ ၁၉၉၈-၉၉ မှာ လွှတ်တော်ခေါ်ယူမယ့်ကိစ္စနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ရဲမွန် ရိပ်သာမှာ (၉) လကြာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မေး။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေ ကြုံတွေ့ရပါ သလဲ။ဖြေ။ ။ နာဂစ်ဒဏ်ကြောင့် အန်တီအ်ိမ်လည်း ပြိုတယ်။ အန်တီတို့က ဒေါပုံမှာနေတယ်။ နောက်တနေ့မှ သိရတာက ရန်ကုန်အပြင် ဧရာဝတီတိုင်းမှာလည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီကိစ္စ အစိုးရကနေပြီးတော့ တခုခုလုပ်မှဖြစ်တော့မယ်ပုံမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ အန်တီတို့ စောင့်ကြည့်တယ်။ ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး။ အရင်ဆုံး ကြားတာက ကိုကျော်သူတို့ဆီမှာ လူတွေက စားသောက်ကုန်၊ အ၀တ်အထည်တွေ လာလှူတာရှိတယ်။ ဒီကိစ္စကူညီဖို့ လုပ်အားတွေ လိုတယ်ဆိုတော့ သူ့ဆီဖုန်းဆက်တယ်။ ရွှေကြေးစည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကပါ။ အခုလုပ်ငန်းနား ထားတော့ လာကူညီမယ်ဆိုတော့ သူခေါ်တာနဲ့ အန်တီတို့ သွားတယ်။ ဆန်တွေ၊ အ၀တ်အစားတွေ ယူသွားပြီး မရွှေဇီးကွက်နဲ့ သန်လျင်၊ ထမလုံဘက်သွားပြီး ဝေငှခဲ့တယ်။ ကိုကျော်သူ လုပ်တာကို အားကျပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့လူတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့တယ်။ ဘုရားဖူးသွားခဲ့တဲ့လူတွေ ကားပိုင်ရှင်တွေ အခြားအဖွဲ့အစည်းအစုံပဲ ကယ်ဆယ်ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်။ အထက်ဗမာပြည် ဘုရားဖူးခရီးကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကလူတွေ အများဆုံး လိုက်ကြတော့ သူတို့ဘက်က ဒီလိုဒုက္ခ ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် ဒေးဒရဲ၊ မော်ကျွန်း၊ ဘိုကလေးဘက်ကို မေတ္တာရှင်အဖွဲ့အပါအ၀င် အခြားအဖွဲ့တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်။မေး။ ။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို အာဏာပိုင်တွေ အနှောင့်အယှက်ပေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပါရစေ။ဖြေ။ ။ ဒီပြဿနာ အန်တီတို့ ခဏခဏကြုံရတယ်။ အန်တီတို့လုပ်ငန်းက ကားလည်းငှား တော့ သားအကြီးဆိုရင် ကားမောင်းပြီး ကိုယ်တိုင်လိုက်တာ လမ်းခရီးမှာ တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်တယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေများပြီး သွားမရလောက်အောင် အခက်အခဲတွေ ကြုံရ တယ်။ သွားမှာက ဒေးဒရဲကို ဒါပေမယ့် ဒေးဒရဲကို မရောက်ခဲ့ဘူး။ ပြန်လာတော့ ပစ္စည်းတွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုလည်း ပြန်မသယ်ချင်တော့ လမ်းမှာ ကြုံရာကို ပေးခဲ့ရတယ်။ ပြန်လာတဲ့အခါ သားရော၊ ကားရော အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ကတိခံဝန်ချက်တွေ ဘာတွေတောင်းပြီးမှ ပြန်လွှတ် ပေးတယ်။ ဒီလိုပြဿနာမျိုး အခြားအလှူရှင်အဖွဲ့တွေ တော်တော်များများ ကြုံတွေ့ရတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ကနေတဆင့်ပဲ လှူစေချင်တော့ ဒီကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ မရှိကြ သလောက်ပဲ။မေး။ ။ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား။ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ အန်တီတို့ကို အာဏာပိုင်တွေက အန်အယ်လ်ဒီမှန်းလည်း သိတယ်။ ခရီး သွားလုပ်ငန်း လုပ်မှန်းလည်းသိတယ်။ သူတို့က နည်းနည်းဆို များများ၊ အန်တီလည်း သူတို့နဲ့ နည်းနည်းစကားများခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့လည်း သိတယ်။ အန်တီမိတ်ဆွေနှစ်ဦးဆိုရင် လှူရင်း တန်းရင်းကနေ အိမ်ပြန်မရောက်ဘဲ ဒီကနေ့အထိ ပျောက်ဆုံးနေတယ်။မေး။ ။ လက်ရှိပြည်တွင်းအခြေအနေ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ဖြေ။ ။ မလုပ်သင့်တဲ့အချိန် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်တာတွေ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သိတဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကန့်ကွက်ဆန္ဒမဲပေးဖို့၊ စည်းရုံးတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခြေအနေက အန်တီတို့အိမ်က ကားစပယ်ရာတွေတောင် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အန်တီတို့ကို ရန်တွေဘာတွေလုပ်ပြီး အိမ်ရှေ့ကနေ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လျှောက်ပြီး တောင်ကြည့် မြောက် ကြည့်နဲ့ သူတို့မှာ အာဏာတွေ ပါဝါတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အဲလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ ကြာရှည်နေဖို့ဆိုတာ သိပ်ပြီး အဆင်အပြေလှဘူး။ လူထုတွေကတော့ အကျပ်အတည်းကြားမှာပဲ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်မားနေတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘာမှမရှိဘူး။ အိမ်ရှိ လူအားလုံးဆင်းပြီး အလုပ်လုပ်ကြမှ စားရသောက်ရတယ်။ အလုပ်အကိုင် လုပ်ရတာတွေလည်း မချောမွေ့ဘူး။ အာဏာပိုင်တွေကလည်း အမျိုးမျိုး အနှောင့်အယှက်ပေးတွေ ရှိတယ်။မေး။ ။ ဒီမှာ ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ။ဖြေ။ ။ အပြင်ကို ရောက်နေတဲ့လူတွေက အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တယ်ထင်လို့ ထွက်လာတာ ဖြစ် တယ်။ ဟိုမှာက လှုပ်ရှားလို့မရဘူး။ နည်းနည်းလေးလုပ်တာနဲ့ ဆွဲပြီး ပြန်လွှတ်ဖို့တောင် အစီအစဉ် မရှိဘူး။ ခါတိုင်းဆိုရင် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ပြန်လွှတ်ပေးတာတွေ ရှိတယ်။ အခုက တခါတည်း ဆွဲထားလိုက်တာပဲ။မေး။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရှေ့ရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူကြီးတွေ လုပ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ အန်တီတို့က အဖွဲ့ချုပ် အကြောင်းကိုလည်း သိပါတယ်။ ၉၀ ပြည့်နှစ် ရလဒ်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အမြဲတမ်း သွားကြမှာကို ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (စီအာပီပီ) လည်းရှိတယ်။ စီအာပီပီက ၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုပဲ အဖြေရှာမယ်။ ဒါကတော့ အန်တီတို့ အမြဲတမ်းနေရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။မေး။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ကျရင် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ ရှိမရှိ သိပါရစေ။ဖြေ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ၀င်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ထောက်သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။ အန်တီတို့ကတော့ ဒေါ်စုရဲ့အဖြေကိုပဲ လိုချင်တယ်။ အန်တီအမြင်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ မ၀င်တာကိုဘဲ အန်တီတို့ကတော့ မှန်တယ်လို့ ပြောရမယ်။မေး။ ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ အားလုံး အတူတကွ စည်းလုံးပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ ဖြစ်စေချင်တယ်။ နောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကိုလည်း စိတ်ကောင်းလေးထားဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် ကိုပဲ သူတို့က ချစ်နေပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို မချစ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျော သားရင်သား မခွဲခြားဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ကြည့်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ကန့်ကွက်မှုများကြား အီရန်က ဒုံးကျည် ထပ်မံစမ်းသပ်10 July 2008အီရန်နိုင်ငံက တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်များ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေစဉ်။ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၀၈။အီရန်နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဒုံးလက်နက် ၉ ခုကိုစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့လို့ အနောက်နိုင်ငံတွေကပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့ကြားက ဒီနေ့ထပ်ပြီး ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့မှာ ဒုံးလက်နက်တွေ ထပ်ပြီးစမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။မြေပြင်ကနေ ပင်လယ်၊ မြေပြင်ကနေ မြေပြင်၊ပင်လယ်ကနေ ဝေဟင်ကိုပစ်လွှတ်တဲ့ မနေ့ညကတညလုံးလိုလိုစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင် သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ရှာဟတ် ၃ လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ တာေးပစ်ဒုံးလက်နက်တွေကိုမနေ့ကစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီဒုံးလက်နက်တွေဟာအစ္စရေးနဲ့ တခြား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအထိ မိုင်ပေါင်း၁,၂၅၀ အထိ ပစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ရော မဟာမိတ်တွေအပေါ် ကျရောက်လာမယ့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ပါ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် (Condoleezza Rice) က အီရန်နိုင်ငံကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာ ဆိုက်ကပ်ထားတဲ့ အစ္စရေးနဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်က ရေတပ်သင်္ဘောတွေဟာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်မီးရှို့ခံရမယ့် ပစ်မှတ်တွေပဲလို့ အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အယာတိုလာ အလီ ခါမေနီ (Ayatollah Ali Khamenei) က ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကြုံးဝါးခဲ့ပါသေးတယ်။အီရန် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်မှုအပေါ် အမေရိကန် ပြစ်တင်ဝေဖန်10 July 2008အီရန်နိုင်ငံကနေ တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ၉စင်း အစမ်းပစ် ပြုလုပ်ခဲ့တာမို့ အီရန်ရဲ့ လက်နက်တွေဟာ အစ္စရေးနဲ့ တခြား အမေရိကန်ရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဆီအထိ ပစ်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ ပူပန်လာကြပါတယ်။ အခုလို အီရန်က ဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အီရန်အခု စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှုတွေဟာ အီရန်ကို အမေရိကန်က စစ်ရေးအရ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်လိုမှ နီးစပ်မလာစေဘူးလို့ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ရောဘတ် ဂိတ်စ်က ပြောပါတယ်။အီရန် တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ ဦးစီးမှူး ဟိုဆန် စလာမီကတော့ အခုလို အီရန်က စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာ ရန်ဘက်တွေအတွက် အီရန်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အင်အားကို ပြတာလို့ ပြောပါတယ်။ အီရန်ရဲ့ နယူးကလီးယား လက်နက်အမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ အစ္စရေးတို့ဘက်က တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ အီရန်က အပြင်းအထန် သတိပေးခဲ့တဲ့နောက်မှ အခုလို လက်နက် စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ အီရန်ဟာ နယူးကလီးယား လက်နက်တွေ ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ နိုင်ငံကြီးတွေက သံသယရှိနေပေမယ့် ဒါကို အီရန်က ငြင်းပါတယ်။ယခုနှစ် ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကျဆင်းနိုင်ဟု အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနက အကဲဖြတ်10 July 2008ဦးသားညွန့်ဦးမြန်မာနိုင်ငံက မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတလျှောက် စပါးစိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေတွေမှာ ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းနိုင်တဲ့အပေါ် အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး အကဲဖြတ် အဖွဲ့ကနေ စိုးရိမ်တကြီး စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အချိန်အထိတော့ စိုက်ပျိုးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အောင်မြင်မှု ဘယ်အတိုင်းအတာ ရှိသလဲဆိုတာကို ပြောဖို့ စောသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးသားညွန့်ဦးက မေးမြန်း စုံစမ်းထားပါတယ်။USDA လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဌာန အနေနဲ့က အခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန်စပါး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း အတော်လေး ကျဆင်း သွားနိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားတာပါ။ အဓိကကျတဲ့ မိုးစပါး စိုက်ပျိုးရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လယ်စိုက်ပျိုးမြေဧက အတော်များများရှိတဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖက်မှာ မုန်တိုင်းကျပြီး လယ်တွေ ပျက်စီးကုန်တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်တဲ့ အဖွဲ့အနေနဲ့ မူလကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဆန်ထုတ်လုပ်မှုဟာ အခုနှစ်အတွင်း တန်ချိန် အတော်များများ ကျဆင်း သွားလိမ့်မယ်လို့ အကဲဖြတ်ထားပါတယ်။ အဓိကကတော့ စပါးစိုက်မြေဧက အတော်များများမှာ ဆားငံရည် ၀င်ရောက်တာနဲ့ ရေလွှမ်းမိုးတာတွေကြောင့် လယ်မြေအချို့ သုံးမရနိုင် ပျက်စီးကုန်တယ်လို့ အကဲဖြတ်ထားတာပါ။ ဒါကိုလည်း အမေရိကန် အကာသအေဂျင်စီ နာဆာရဲ့ ဂြိုလ်တုကနေ ရိုက်ယူတဲ့ ကောင်းကင်မြေပုံတွေနဲ့ မြေပြင်က အကဲဖြတ် လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခု မိုးတွင်း စိုက်ပျိုးရာသီမှာ လယ်သမားတွေ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးစပါးတွေ၊ ထွက်ယက်ဖို့ လယ်ထွန်စက်တွေ လှုကြတန်းကြနဲ့ စပါး စိုက်ပျိုးမှုအတွက် အတော်လေး အားပေး ထောက်ပံ့နေကြတာ တွေ့နေရပါတယ်။ မိုးတွင်း မိုးရေကြောင့် အချို့ ဆားငံရည်ဝင်တဲ့ စိုက်ပျိုးမြေတွေ ပြန်ကောင်းလာသလို ဖြစ်လာတယ်လို့ ဒေသခံ ကူညီရေးလုပ်သားတွေက ပြောသလို၊ အစိုးရ မီဒီယာတွေမှာလည်း စပါးစိုက်ပျိုးမှုတွေကို အတော်လေး အသားပေး ဖော်ပြ အားပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ အခုနောက်ဆုံး အခြေအနေအရ အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေး ဌာနရဲ့ အကဲဖြတ်ချက်က မှားယွင်းနေပြီလား - ဒါမှမဟုတ် ဒီအပေါ် ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာသလား ဆိုတာကို အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဌာန အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းရေးရာ နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ အကဲဖြတ် လေ့လာသူ Michael Shean ကို ကျနော် မေးကြည့်ပါတယ်။“အခုအချိန် အထိတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေအပေါ် ဘာမှ ပြောင်းလဲမှု မရှိသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု စိုက်ပျိုးရာသီမှာ စိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေ ဘယ်လောက် အောင်မြင်မှုရှိသလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေဆဲမို့ပါ။ အခု သီးနှံ စိုက်ပျိုးမှုတွေကို ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေကြဆဲပါ။ သူတို့အနေနဲ့ စိုက်ပျိုးတာတွေကို အခု သြဂုတ်လ အလယ်ပိုင်းအထိ ကြိုးပမ်း လုပ်ကြမယ်လို့ ကျနော် သိထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တလလောက်တော့ စောင့်ကြည်ဖို့ လိုပါတယ်။ သြဂုတ် နှောင်ပိုင်း ဒါမှဟုတ် စက်တင်ဘာထဲကျရင်တော့ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု အသစ်တွေ ရလာမယ်လို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။”အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုးရေး ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ၀န်ထမ်းတဦးလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှိသလို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာလည်း သူတို့ရုံး ရှိတာကြောင့် အဲဒီကနေ မြေပြင် အချက်အလက်တွေကို သူတို့ ရရှိခဲ့တယ်လို့ Micheal Sean က ပြောပါတယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံချက်နဲ့ နာဆာရဲ့ ကောင်းကင် မြေပုံ တွက်ချက်မှုအရ ခန့်မှန်းချက်က အခုနှစ်မှာ စိုက်ပျိုးမြေ ဧကဟာ အရင်ကထက် အတော်လေးကို နည်းသွားမယ်လို့ သူတို့ တွက်ချက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။“ကျနော်တို့ တွက်ချက်ပြီး ယုံကြည်ထားတာကတော့ အခုနှစ်အတွင်းမှာ စိုက်ပျိုးမြေဧကတွေ အတော့်ကို ရှားပါးသွားမှာပါ။ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းချက်အရ ဆိုရင်တော့ အခုနှစ်အတွင်းမှာ စိုက်ပျိုး မြေဧကဟာ ဟတ်တာ ၇သိန်းလောက်အထိ လျော့နည်း သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာ ဆန်ထုတ်လုပ်မှု တန်ချိန် ၁ ဒဿမ ၃ သန်း၊ စပါး ထွက် တန်ချိန် ၂ ဒဿမ ၃ သန်း လျှော့နည်း ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။”အစိုးရက ပြောနေသလို နေရာ အတော်များများမှာ စပါးစိုက်ပျိုးမှုတွေ လုပ်နေပြီဆိုတာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့တော့ ဒီစီမံချက်ဟာ ဘယ်လောက် အောင်မြင်မှု ရှိမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြေပြင် အစီရင်ခံချက်တွေကို စောင့်နေတာအပြင်၊ အခြား ဝေဟင် ဂြိုလ်တုကနေ ရိုက်ယူတဲ့ ကောင်းကင် မြေပုံအရ တွက်ချက်ဖို့ လည်း ရာသီဥတုကြောင့် လတ်တလော အခက်ရှိတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။“အခု မိုးရွာသွန်း နေတာကြောင့်ရော တိမ်ထူထပ် နေတာကြောင့်ရော အဲဒီကနေ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်ဖို့ဆိုတာက ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု သြဂုတ် အကုန်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးမှုတွေ ဘယ်လိုရှိသလဲ အောင်မြင်မှုရှိရဲ့လားဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာကို စောင့်နေရပါတယ်။”အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဌာန အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး အကဲဖြတ် လေ့လာသူ Micheal Sean ပြောကြားသွားတာပါ။ မုန်တိုင်းအလွန် စပါးစိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ - ရေငံတွေနဲ့ ရေလွှမ်းခံခဲ့ရတဲ့ လယ်မြေတွေမှာ စ စပါးစိုက်ပျိုးမှု ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ အောင်မြင်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဌာန အနေနဲ့ အခု စက်တင်ဘာထဲမှာ ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ စပါးအထွက်နှုန်းကိုတော့ ဖော်ပြနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလယ်မြေတွေမှာ စပါးစိုက်ပျိုးနိုင်မှု အခြေအနေပဲ ဖြစ်ပြီး စပါးအထွက်နှုန်းကတော့ သီးခြား စပါးပေါ်ရာသီမှာပဲ အကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Michael Shean က ပြောခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းသင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ရေး ရန်ပုံငွေ ပိုမိုလိုအပ်10 July 2008မခင်ဖြူထွေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်က တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်ပျက်ဆီးခဲ့ရသလို နဂိုကတည်းကလည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မကောင်းတာကြောင့် အခုလို မုန်တိုင်းဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွား သင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတယ်လို့ UNFPA ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ဆေးဝါးအထောက်အကူ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆေးပညာတတ်ကျွမ်းသူတွေ နည်းပါးလွန်းတာကြောင့် အမျိုးသမီး၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေကို မကြာသေးခင်ကမှသွားရောက်ခဲ့တဲ့ UNFPA အာရှဒေသဆိုင်ရာပြောခွင့်ရ ၀ီလျံ အေ.ရိုင်ယမ် (William A.Ryan) က ပြောပြပါတယ်။“မုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်း ၂.၄ သန်းလောက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေလည်း ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ ပါပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ၎,၀၀၀ ကျော်လောက်ဟာ မကြာခင် မီးဖွားတော့မယ့်သူတွေပါ။ သူတို့အတွက်ကျန်းမာရေး ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ဆေးခန်းတွေ အများအပြား ပျက်ဆီးခဲ့သလို သားဖွားဆရာ၊ ဆရာမတွေလည်းသေဆုံးခဲ့အထဲမှာ ပါခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အခုအခါ ဒီအမျိုးသမီးတွေ အသက်အန္တရာယ်မရှိ မီးဖွားနိုင်ဖို့ သန့်ရှင်းစိတ်ချရတဲ့ ဆေးကိရိယာတွေ၊ ဆေးဝါးအထောက်အပံတွေအပြင် သူတို့အတွက် တနေရာကနေ တနေရာ အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးခန်းတွေနဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ကျန်းမာရေးကို အထူးအလေးထား ပြောနေရတာလဲဆိုတော့ မိခင်ကနေ ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်နိုင်သလို ကလေးနဲ့မိခင်အတွက် အာဟာရချို့တဲ့တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တခါ မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ၊ မိသားစုတွေ သေဆုံးရတဲ့အခါ ကြုံတွေ့တဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်တွေရှိသလို ကိုယ်ဝန်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ စိတ်အင်အားကျဆင်းတာနဲ့အတူတခြားရောဂါမျိုးစုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိခိုက်လွယ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးအကူအညီတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာပါ။”အခုလို မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအကူအညီတွေ အပူတပြင်း လိုအပ်နေတာကြောင့် ဒီဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေတိုးပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ တောင်းခံဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းလည်း မစ္စတာဝီလျံကပြောပါတယ်။“မြန်မာနိုင်ငံက မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေတိုးပေးဖို့ ဒီနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂကို မေတ္တာရပ်ခံဖို့ ရှိပါတယ်။ မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျနော်တို့မှာ အများကြီးလုပ်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကျနော်တို့ မေ့ထားလို့မရသလို သူတို့အတွက် ဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေ၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ နောက်ထပ်ဆေးဝန်ထမ်းတွေ မွေးထုတ်ပေးဖို့ ကျန်းမာရေးသင်တန်းတွေလုပ်ဖို့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ ပိုလိုအပ်နေတာပါ။”UNFPA အာရှဒေသဆိုင်ရာ ပြောခွင့်ရ ၀ီလျံ အေ.ရိုင်ယမ်က ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။G8 Summit and BurmaDear Friends of Burma:The leaders from the G8 countries including Canada discussed ongoing political issues in Burma in the latest G8 Summit in Japan. It appears to be the first time G8 leaders touched Burma issue in that sitting, as it’s never had such discourses in the previous Summits. Please see the following two excerpts from the declarations adopted in G8 Summit and G8 Foreign Ministers' Meeting.G8 Summit, (Hokkaido Toyako, July92008), Chair's Summary[Burma]: We call on the authorities of [Burma] to lift all remaining restrictions on international aid and to improve the transparency of the incoming aid to the cyclone-affected areas. We expressed concern about the current political situation in [Burma]. We call on [Burma] to fosterapeaceful transition toalegitimate, democratic, civilian government. We encourage the authorities of [Burma] to engage all stakeholders in an inclusive and transparent political process. In this context, we call on [Burma] to immediately release political detainees including Aung San Suu Kyi. We strongly support the UN Secretary General's good offices mission and urge [Burma] to cooperate fully with Special Adviser Ibrahim Gambari. We are prepared to respond positively to substantive political progress undertaken by [Burma].Full text link: http://www.g8.gc.ca/2008-G8SummitChairsSummary-en.aspG8 Foreign Ministers' Meeting, (Kyoto, June 27, 2008), Chairman's Statement[Burma]: Foreign Ministers remain committed to ensuring aid reaches those affected by Cyclone Nargis; we therefore call on the authorities of [Burma] to lift all remaining restrictions on the flow of aid and to improve access for foreign aid workers to the affected areas. At the same time, the Ministers expressed concern about the current political situation in [Burma]. We call on [Burma] to fosterapeaceful transition toalegitimate, democratic, civilian government. We encourage the authorities of [Burma] to engage all stakeholders in an inclusive and transparent political process. In this context, we call on [Burma] to immediately release political detainees including Aung San Suu Kyi. We strongly support the UN Secretary General's good offices mission and urge [Burma] to cooperate fully with Special Adviser Ibrahim Gambari. We are prepared to respond positively to substantive political progress undertaken by [Burma].Full text link: http://www.g8.gc.ca/2008-G8ForMinChairSummary-Kyoto-en.asp-Canadian Friends of Burma-The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org
ExtremeCopy v2.3.2 Pro For Pc 7MB X64 & X32
Coolpic : Facebook မှာ Funny Photo တွေလုပ်မယ်
Lamborghini နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် အမှတ်တရ Veneno